XOG MUHIIM AH-Farmaajo iyo Xasan Sh oo kulmay iyo arrin muhiim ah oo ay isku fahmi waayeen. – Puntland News.net
Home 2017 February 12 Somali News XOG MUHIIM AH-Farmaajo iyo Xasan Sh oo kulmay iyo arrin muhiim ah oo ay isku fahmi waayeen.
XOG MUHIIM AH-Farmaajo iyo Xasan Sh oo kulmay iyo arrin muhiim ah oo ay isku fahmi waayeen.
Madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Madaxweynaha cusub Maxamed C/llahi Farmaajo ka dalbaday in il gaara uu ku eego Shaqaalaha iminka ka howlgala Xarunta Madaxtooyada Somalia.
Xasan Sheekh Maxaweynihii hore ee dalka ayaa Madaxweynaha cusub u sheegay in Shaqaalaha iminka ka howlgala Xarunta Madaxtooyada ay leeyihiin Khibrad shaqo isla markaana ay wanaagsanaan laheyd in Dowladiis ay lasii shaqeyso dadka khibrada leh.
Xasan Sheekh waxa uu sidoo kale Madaxweyne Farmaajo ka codsaday in Dowladiisa ay waxbadan kusoo kordhiso dalka, isla markaana dhankiisa uu diyaar u yahay inuu garabsiiyo Dowlada Cusub ee iminka shaqeyn doonta.
Xasan Sheekh ayaa Madaxweyne Farmaajo ku wargaliyay in inta badan Shaqaalaha Dowladu ay leeyihiin khibrad shaqo marka laga soo tago duruufaha ka jira dalka oo aan saamaxeynin in talaabo waliba si sahlan lagu qabto.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Xasan Sheekh ka aqbalay soo jeedintiisa, waxa uuna cadeeyay in Dowladiisu aysan lidi ku aheyn Hanaanka shaqo ee Dowlada balse ay doonayaan inay dardar galiyaan howlaha iminka qabyada u ah Dowlada si loo helo jawi degan iyo in dib loo soo celiyo sharciyada dalka.
Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Dowladiisu ay uruurin doonto dadka Khibrada u leh shaqooyinka Dowlada iyadoo aan loo eegeynin waxa ay yihiin waxa uuna ballanqaaday in Dowladiisu aysan ku fududaan doonin shaqooyinka Qaranka.
Docda kale, Farmaajo iyo Xasan Sheekh ayaa isla gartay in dalka uu u baahan yahay isbedel la taabankaro oo dhan waliba leh, si loo samatabixiyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
One thought on “XOG MUHIIM AH-Farmaajo iyo Xasan Sh oo kulmay iyo arrin muhiim ah oo ay isku fahmi waayeen.”
Nuh Mohamed February 12, 2017 at 12:13 pm · Edit
Macquul ma ahan shaqaalihii hore ee la shqeynayey Madaxweynihii xilkiisu dhamaaday in ay sii joogaan Madaxtooyada in kasta oo aynu ka warheeyno in ay ku jiraan dad badan oo muhiim ah, muwaadiniin somaliyeed ah wibana eynu u heynu mahad gaar ah..balse aan taa u daayo Madaxweyne Farmaajo iyo Xisbigiisa waxey isku afgartaan,, waayo Caqli-xumi kuma an tirinayo==Nuh